people Nepal » पुष्पकमल दाहाल : कोइरालाको सपना पुरा गर्न स्थिर सरकार र देश सम्बृद्ध बन्नुपर्छ पुष्पकमल दाहाल : कोइरालाको सपना पुरा गर्न स्थिर सरकार र देश सम्बृद्ध बन्नुपर्छ – people Nepal
पुष्पकमल दाहाल : कोइरालाको सपना पुरा गर्न स्थिर सरकार र देश सम्बृद्ध बन्नुपर्छ
२६ कात्तिक, चितवन : माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्व. गिरीजाप्रसाद कोइरालाको सपना पुरा गर्न स्थिर सरकार र देश सम्बृद्ध बन्नु पर्ने बताएका छन ।
चितवन क्षेत्र नम्बर ३ अन्तर्गत आज मंगलपुरमा आयोजित चुनाबि सभालाई संम्बोधन गर्दै उनले बिस्तृत शान्ति सम्झौताको एउटा हस्ताक्षरकर्ता आफु र अर्को हस्ताक्षरकर्ता कोईराला रहेको भन्दै उनका सपना पुरा गर्ने जिम्मा आफुमा रहेको बताए ।
संबिधान सभाको दोस्रो निर्वाचनमा स्व. शुशिल कोइराला निर्वाचित भएको सो क्षेत्रमा काँग्रेसको बाहुल्यता रहेको छ । काँग्रेस जनलाई संम्बोधन गर्दै प्रचण्डले भने “राष्ट्र निर्माणका लागि गिरीजा प्रसादलाई सम्झेर आफुलाई मतदान गर्न नेपाली काँग्रेसका कार्यकर्तालाई आग्रह गर्दछु ।” यस क्षेत्रबाट काँग्रेसका पुराना र संघर्षशिल नेता उम्मेदवार भएको भए मेरो प्रतिश्पर्धी हुने थियो तर काँग्रेसको उम्मेदवार नहुँदा मेरो प्रतिस्पर्धी कोही छैन ।
उनले भने “ एक ब्यापारी, ठेकेदार, विचार,राजनिती नभएको कुनै परिबर्तनकारी आन्दोलनमा सरिक नभएको बरू परिवर्तनको बिरोधमा लागेको ब्यक्ति कसरी मेरो प्रतिस्पर्धी हुन सक्छ ?” अध्यक्ष प्रचण्डले बामपन्थी हरूको स्थिर सरकारले मात्र देशको मुहार कायापलट हुने बताउदै पाँच बर्षमा देशको मुहार फेरी छाड्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे। बामपन्थीहरूको एकता राष्ट्रको एकता भएको बताउदै अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसलाइ पनि बृहद प्रजातान्त्रिक एकता कायमगरी आगाडी बढ्न सुझाब दिए ।
निर्वाचन जित्नैकालागि आफू चितवन आएको नभइ चितवनको समग्र बिकासकालागि आफ्नो उमेद्ववारी रहेको बताए ।